Myanmar Fonts for Mi Beginners – Xiaomi Guide
Xiaomi ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာစာကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့ China Rom ဆိုရင် တစ်မျိုး၊ Global Rom ဆိုရင် တစ်မျိုး လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အဲသည်အတွက် ကိုယ့်ဖုန်း rom ဟာ china လား၊ global လား ဆိုတာ အရင်ဆုံး အောက်ပါအတိုင်း ကြည့်လို့ခွဲခြားပါ။
Myanmar Fonts for China ROM
CHINA ROM တွေအတွက် လုပ်နည်းကို အရင်စပြောပေးပါမယ်။ Mi Account တစ်ခုလုပ်လို့ Login ကတော့ ဝင်ထားပြီးသား ဖြစ်နေရပါမယ်။ login ဝင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ Xiaomi Theme Store ကနေပဲ Myanmar font ကို အလွယ် download ပြုလုပ်ပြီး ထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Fonts Option ရှိတဲ့ဆီသွားပါ။
သည်လိုပုံစံနဲ့လဲ Fonts ရှိတဲ့ဆီ သွားလို့ ရပါတယ်။
Xiaomi Theme Store မှာရှိတဲ့ Myanmar Zawgyi Fonts ကို Download ပြုလုပ်ရန်
လိုချင်တဲ့ Font ကို Download ပြုလုပ်ပြီးသုံးစွဲရန်
ယခုဆိုလျှင် CHINA ROMs တွေမှာ မြန်မာစာထည့်သွင်းခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။ System Update လုပ်လိုက်မိသည်ဖြစ်စေ၊ Themes တွေချိန်းတဲ့အခါ Reboot လုပ်လိုက်မိသည်ဖြစ်စေ မြန်မာစာ မမှန်တော့သည်ကို တွေ့ပါက အောက်ပါပုံများအတိုင်း ပြန်ရှာလို့ ပြန်ရွေးသုံးနိုင်ပါတယ်။
MIUI9China ROM ကိုတင်ပြီးသုံးထားရင်တော့ Themes app ထဲကနေ အောက်ပါပုံအတိုင်း Fonts ရှိတဲ့နေရာသွားလို့ Fonts ရှာတာ.. ရွေးတာ.. Apply တာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Myanmar Font For Global ROM
Global ROM တွေမှာ မြန်မာစာရှာသုံးနည်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ Global rom မှာ China rom တွေမှာကဲ့သို့ Myanmar font ကို Xiaomi Themes Store ကနေ download လုပ်ပြီးသုံးလို့မရပါ။ ROM ထဲမှာ တစ်ခါတည်း ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံများအတိုင်း Font ကိုရှာလို့ Apply လုပ်လိုက်ပါ။ အခုနည်းနဲ့သုံးတာဟာ MIUI version 8 မှာ အသုံးပြုနည်းပါ။ MIUI9Global ROM တွေမှာ Locale or Region နေရာမှာ Myanmar ရွေးပေးထားပေမယ့် Themes app ထဲမှာ Fonts ရွေးဖို့ ပေါ်မလာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲသည်အခါ Region နေရာ India ရွေးပေးပါ။ Fonts ရွေးတဲ့နေရာ ပေါ်လာပါမယ်။ Settings -> Additional Settings -> Date/Time ထဲမှာတော့ Time Zone ကို GMT+6:30 Myanmar Time ကို Manual ထားပေးထားပါ။ အဲလိုမှ ဖုန်းမှာ အချိန်မှန်ပါမယ်။
ယခုဆိုလျှင် MIUI Global ROM မှာ မြန်မာစာအသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း အဆင်ပြေပါပြီ။
Global ROM တွေမှာ Region နေရာရွေးမရခဲ့ရင်
MIUI8/9 Global Rom မှာလည်း firmware တင် ရာတွင် လိုအပ်ချက်တစ်ခုခုကြောင့် Locale or Region မှာ China only ပဲဖြစ်နေတတ်ပြီး Fonts ရှိသောနေရာကို သွားလို့မရပါ။ အဆိုပါကိစ္စများပြေလည်အောင် Quick Short Cut Maker app လေးကို သုံးပြိး Fonts icon ဖော်ပါမယ်။ ပြီးမှ မိမိတို့ အလိုရှိရာ mm font ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါမယ်။ Xiaomi Theme Store ထဲက font မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပိုင် mtz font တွေဖြစ်လို့ ကိုယ့် Mi Account ဟာ Designer Account type ပါဖြစ်နေရပါမယ်။ ကိုယ့် Mi Acc ဟာ DA မဟုတ်ရင်တော့ အခြား Designer Account ရပြီးသူ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ Account ကို ခေတ္တအသုံးပြုလို့ mtz font တွေကို import လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံများကို လေ့လာလို့ ပြုလုပ်ပါ။
Font Shortcut ထုတ်ပြီးလျှင် မိမိဖုန်းထဲတွင် Download ပြုလုပ်ထားသော mtz theme font များကို import လုပ်ပြီး ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ (Designer Account လိုအပ်ပါသည်။ အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ Designer account တစ်ခုကို ခဏ login ဝင်ထားပြိးလည်း import လုပ်နိုင်ပါသည်။ import လုပ်ပြီးပါက Mi account login ဝင်မထားလည်း Fonts များကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ)။ အောက်ပါပုံအတိုင်း မိမိဖုန်းထဲမှာ download လုပ်ယူထားသော mtz fheme font ကို import လုပ်ပါ။
ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ mtz font ကို import လုပ်ပြီးပါက Home Key နှိပ်လို့သာ ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း မိမိတို့ import လုပ်ထားသော Font ကို ချိန်းသုံးပါ။
Remark : ယခုနောက်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Xiaomi Theme Policies တွေကြောင့် Designer Account ရှိသော်လည်း mtz theme font file တွေကို Import လုပ်လို့ရသော်ငြား Apply လုပ်လို့မရတော့ပါ။ သည်နည်းကို [ New Way to Apply Custom Xiaomi Themes & Fonts ] ဖတ်ကြည့်ပြီး နည်းထဲတွင်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း MIUI Theme Editor app လေးအကူအညီနဲ့ မိမိတို့ထံမှာရှိနေသော Themes, Fonts mtz files များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Download Simple Zawgyi MTZ Font files – 31 Fonts
Download Zawgyi Redefined MTZ Font files – 10 Fonts
ယခုဆိုလျှင် China ROM မှာဖြစ်စေ၊ Global ROM မှာဖြစ်စေ မြန်မာစာကို အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်အောင် ထည့်သွင်းလို့ရသွားပါပြီ။
Browser များနှင့် မြန်မာစာ
Facebook သုံးနေရင် Web site link တွေ ဖွင့်ရင် မြန်မာစာ (zawgyi font) ကို အမှန်မြင်ရ အောင် အလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ UC Browser ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Link တော်တော်များများအတွက်ကို စာမှန် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ Original Browser သည်လည်း တော်တော်မှန်ပါတယ်။ Zawgyi ပဲလာလာ.. Unicode နဲ့ပဲလာလာ မှန်နေချင်ရင်တော့ Firefox Browser ကို အသုံးပြုလို့ Tagu add-on လေးထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် 100% unicode မြန်မာစာ ပဲဖြစ်ဖြစ် zawgyi မြန်မာစာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပြေဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Firefox Browser ကို install ပြုလုပ်ပြီး အောက်ပါပုံများအတိုင်း Tagu add-on လေးကို ထည့်သွင်းပေးပါ။
Facebook မှ web site link ကိုဖွင့်တာနဲ့ Firefox browser နဲ့ပွင့်လာနိုင်အောင် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေး ပါ။ UC Browser သုံးရင်လည်း အလားတူပြုလုပ်ပေးထားပါ။
Myanmar Font ကို ဖုန်းမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Mi Account လိုပါမယ်။ Mi Account မသုံးချင်ရင်၊ Mi Account သုံးလို့မရရင် သည်နည်းကို [ New way to apply Custom Xiaomi Themes & Fonts ] အသုံးပြုပြီး Myanmar Font တွေထည့်ဖို့လုပ်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ Font mtz file တွေလိုပါမယ်။ အထက်မှာ mtz file တွေလိုချင်ရင် download ဖို့ link ပေးထားပါတယ်။
China ROM ဆို Xiaomi Theme Store ထဲကနေပဲ moethittnyo ဒါမှမှမဟုတ် ZG ဆိုတာရှာ Search လုပ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါ။
Global ROM ဆို Locale or Region နေရာမှာ Myanmar or India ကိုရွေးပါ။ Font ရွေးဖို့ပေါ်လာပါမယ်။ ဖုန်းမှာပါပြီးသား ZawgyiX1 ကိုသုံးချင်သုံးပါ။ မသုံးချင်ရင် MIUI Theme Editor app လေးသုံးပြီး မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် font တွေကို ထည့်သုံးပါ။
Global ROM တွေအတွက် Region နေရာရွေးစရာမရှိဖြစ်လာခဲ့ရင် Quick Shortcut Maker app လေးသုံးလို့ Font Shortcut ထုတ်ပါ။ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် mtz font file တွေကို MIUI Theme Editor app အကူအညီနဲ့ထည့်သုံးပါ။
ယခုဆိုလျှင် Global rom မှာပဲဖြစ်စေ၊ China rom မှာပဲဖြစ်စေ မြန်မာစာကို အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်၊ ဖတ်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော CoC, News apps, smule, အစရှိသော app များတွင် မြန်မာစာအမှန်မပေါ်ခြင်းအတွက် ကတော့ Boot Loader Unlock, TWRP, Root ဆိုသော အရာများတွင် မိမိတို့ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းကို နှစ်မြှုပ်လို့ ဆက်လက်လေ့လာပါတော့ခင်ဗျာ.
Mi5A prime မှာbrowesrမှာမှန်တယ် blogတွေဆိုမမှန်ဘူးအကိုပြောသလိုတန်ခူးသုံးတာပါ
Firefox Browser + MUA Addon နဲ့ဟာသုံးကြည့်ပါ. နောက်ပိုင်းမှာ Tagu က အဆင်မပြေတော့ပါ.. သည် blog ထဲမှာပဲ အဲသည်လို တွဲလုပ်သုံးနည်းရှိပါတယ်